Simba raMwari: Jehovha Mwari Wemasimbaose Ane Simba | Swedera Pedyo
CHITSAUKO 8 Simba Rokudzorera—Jehovha Ari Kuita “Kuti Zvinhu Zvose Zvive Zvitsva”
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Baoule Bengali Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Niuean Norwegian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Setswana Seychelles Creole Shona Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Thai Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
1, 2. Zvinhu zvipi zvinoshamisa izvo Eriya akanga aona muupenyu hwake, asi zviitikoi zvinoshamisa zvaakaona ari mubako muGomo reHorebhi?
ERIYA akanga amboona zvinhu zvinoshamisa. Akanga aona makunguo achimuvigira zvokudya kaviri pazuva achigara akavanda. Akanga aona midziyo miviri, mumwe waibudisa upfu mumwe mafuta munguva yose yenzara refu asi zvisingamboperi. Akanga atoona moto uchibva kudenga semhinduro yomunyengetero wake. (1 Madzimambo, zvitsauko 17, 18) Kunyange zvakadaro, Eriya akanga asati amboona chinhu chakadai.
2 Sezvaakanga akagonya ari pedyo nomuromo webako muGomo reHorebhi, akaona zviitiko zvinoshamisa zvakatevedzana. Pakutanga kwakaita mhepo. Inofanira kuva yakaomba ichivhuvhuta zvokuvhara nzeve, nokuti yakanga yakasimba zvokuti yakatsemura makomo nokupwanya matombo. Tevere kwakava nokudengenyeka kwepasi, kuchibudisa simba guru riri pasi pevhu. Kwakazouya moto. Sezvawakatsvaira nharaunda yacho, pamwe Eriya akanzwa mhepo yawo yaipisa samare.—1 Madzimambo 19:8-12.
“Zvino Jehovha akapfuurapo”
3. Eriya akaona uchapupu hwokuti Mwari akaita sei, uye isu tingaona kupi uchapupu hwezvimwe chete izvi?
3 Zviitiko zvose zvakasiyana-siyana zvakaonekwa naEriya zvakanga zvakafanana pachinhu chimwe—kwakanga kuri kuratidzwa kwesimba guru raJehovha Mwari. Ichokwadi hazvo kuti hazvidi kutanga taona chishamiso kuti tizive kuti Mwari ndizvo zvaari. Zviri pachena. Bhaibheri rinotiudza kuti zvakasikwa zvinopa uchapupu hwe“simba ra[Jehovha] risingagumi nokuva Mwari kwake.” (VaRoma 1:20) Imbofunga nezvokupenya kunopofumadza nomutinhimira wemabhanan’ana, kupopoma kunoyevedza kwemapopoma makuru, kukura kusina mugumo kwematenga azere nyeredzi! Hauoni simba raMwari here richiratidzwa muzvinhu zvakadaro? Asi, vashomanana munyika yanhasi vanobvuma zvechokwadi simba raMwari. Kunyange zvakadaro, vashoma vavo vanoriona mune zvakanaka. Zvisinei, kunzwisisa zviri Mwari izvi, kunotipa zvikonzero zvizhinji zvokuswedera pedyo naJehovha. Muchikamu chino tinotanga kudzidza zvakadzama nezvesimba raJehovha risina ringaenzana naro.
Chinhu Chinokosha Paunhu hwaJehovha
4, 5. (a) Zita raJehovha rakabatana pai nesimba rake? (b) Nei zvakakodzera kuti Jehovha akasarudza nzombe kufananidzira simba rake?
4 Jehovha ane simba rakasiyana nerevamwe vose. Jeremia 10:6 inoti: “Hakuna wakafanana nemi Jehovha; imi muri mukuru, zita renyu iguru nesimba raro.” Ona kuti simba rakabatanidzwa nezita raJehovha. Yeuka, zviri pachena kuti zita iri rinoreva kuti “Anoita Kuti Zvive Sezvaanoda.” Chii chinogonesa Jehovha kuti azviite kuti ave chero chaanenge asarudza? Chokutanga isimba. Hungu, kukwanisa kwaJehovha kuita chiito, kuita kuda kwake, hakuna muganhu. Simba rakadaro chinhu chinokosha paunhu hwake.
5 Nemhaka yokuti taisazombonzwisisa zvizere kukura kwesimba rake, Jehovha anoshandisa mienzaniso kutibatsira. Sezvataona, anoshandisa nzombe kufananidzira simba rake. (Ezekieri 1:4-10) Chisarudzo ichocho chakakodzera, nokuti kunyange nzombe yepamusha chisikwa chikuru uye chine simba. Vanhu vomuParestina yomunguva inotaurwa muBhaibheri, havana chimwe chine simba kupfuura ipapo chavakamboona. Asi vaiziva nezvorumwe rudzi rwenzombe inotyisa zvikuru—nzombe yomusango, kana kuti aurochs, iyo yakatsakatika kubva panguva iyoyo. (Jobho 39:9-12) Mambo weRoma Julius Caesar akambotaura kuti nzombe idzi dzakanga dzakada kuenzana nenzou. “Dzine simba guru,” akanyora kudaro, “uye dzichimhanya kwazvo.” Fungidzira kuti waizonzwa uri kanhu kasina maturo uye usina simba sei kana waizomira pedyo nechisikwa chakadaro!
6. Nei Jehovha oga achinzi “Wemasimba Ose”?
6 Saizvozvowo, munhu haana maturo uye haana simba kana achienzaniswa naMwari ane simba, Jehovha. Kwaari, kunyange marudzi ane simba akangoita seguruva riri pachikero. (Isaya 40:15) Kusiyana nezvisikwa zvose, Jehovha ane simba guru kwazvo, nokuti iye bedzi ndiye anonzi “Wemasimba Ose.” * (Zvakazarurwa 15:3) Jehovha “mukuru pakusimba kwake” uye ane “ukuru hwesimba.” (Isaya 40:26) Ndiye anongogara ane simba rakawanda, risingaperi. Haavimbi nesimba rinobva kumwe, nokuti “simba nderaMwari.” (Pisarema 62:11) Zvisinei, Jehovha anoshandisa simba rake sei?
Mashandisire Anoita Jehovha Simba Rake
7. Mudzimu mutsvene waJehovha chii, uye chii chinoratidzwa nemashoko omutauro wepakuvamba wakashandiswa muBhaibheri?
7 Mudzimu mutsvene unoduruka uchibva kuna Jehovha nguva dzose. Isimba raMwari riri kushanda. Pana Genesi 1:2, NW, Bhaibheri rinototaura nezvawo richiti “simba rinoita basa” raMwari. Mashoko echiHebheru nechiGiriki epakuvamba anoshandurwa kuti “mudzimu” angashandurwa pane dzimwe nguva achinzi “mhepo,” “mhepo yokufema,” uye “dutu.” Maererano nevadudziri vemashoko, mashoko omutauro wepakuvamba anoreva simba risingaoneki riri kuita basa. Kufanana nemhepo, mudzimu waMwari hauonekwi nemaziso edu, asi zvaunoita zvinhu chaizvo uye zvinooneka.
8. MuBhaibheri, mudzimu waMwari unonzi chii nenzira yokufananidzira, uye nei kuenzanisa uku kwakakodzera?
8 Mudzimu mutsvene waMwari unochinja kuti uwirirane nezvinhu zvose. Jehovha anogona kuushandisa kuita chero chinangwa chaanofunga. Saka nenzira yakakodzera, muBhaibheri mudzimu waMwari mukufananidzira unonzi “munwe” wake, “chanza” chake “chine simba,” kana kuti “ruoko” rwake “rwakatambanudzwa.” (Ruka 11:20; Dheuteronomio 5:15; Pisarema 8:3) Kungofanana nomunhu anogona kushandisa ruoko rwake kuita mabasa akasiyana-siyana anoda simba rakasiyana kana kuti unyanzvi, saizvozvowo Mwari anogona kushandisa mudzimu wake kuita chero chinangwa—zvakadai sokugadzira tunhu tudiki-diki tusingaoneki nemaziso kana kuti kuparadzanisa mvura yeGungwa Dzvuku kana kuti kugonesa vaKristu vomuzana remakore rokutanga kutaura nendimi dzokumwe.
9. Simba raJehovha rokutonga rakakura zvakadini?
9 Jehovha anoshandisawo simba nechiremera chake saChangamire Wezvinhu Zvose. Ungagona kufungidzira here une mamiriyoni nemamiriyoni evaunodzora vakangwara, vanoda chaizvo kuita zvaunovarayira? Jehovha ane simba rokutonga rakadaro. Ane vanhu vanomushumira, muMagwaro vanowanzofananidzwa neuto. (Pisarema 68:11; 110:3) Zvisinei munhu chisikwa chisina simba kana achienzaniswa nengirozi. Chokwadi, apo uto reAsiria rakarwa nevanhu vaMwari, ngirozi imwe yakauraya 185 000 vevarwi ivavo usiku humwe! (2 Madzimambo 19:35) Ngirozi dzaMwari “dzine simba.”—Pisarema 103:19, 20.
10. (a) Nei Wemasimba Ose achinzi Jehovha wemauto? (b) Chisikwa chaJehovha chine simba kupfuura zvose ndiani?
10 Kune ngirozi ngani? Muprofita Dhanieri akaratidzwa zvokudenga akaona zvisikwa zvomudzimu zvinopfuura mamiriyoni 100 zviri pamberi pechigaro chaJehovha choUmambo, asi hapana chinoratidza kuti akaona ngirozi dzose dzakasikwa. (Dhanieri 7:10) Naizvozvo kungangodaro kune mazana emamiriyoni engirozi. Naizvozvo Mwari anonzi Jehovha wemauto. Zita rokuremekedza iri rinorondedzera nzvimbo yake ine simba soMukuru Weuto guru, rakarongwa remapoka nemapoka engirozi dzine simba. Pamusoro pezvisikwa zvomudzimu izvi zvose, akaisa anotarisira, Mwanakomana wake anodiwa, “dangwe rezvisikwa zvose.” (VaKorose 1:15) Sengirozi huru—mukuru wengirozi dzose, maserafimi, nemakerubhi—Jesu ndiye chisikwa chaMwari chine simba kupfuura zvose.
11, 12. (a) Shoko raMwari rinoratidza simba munzirai? (b) Jesu akapupurira sei ukuru hwesimba raJehovha?
11 Jehovha ane imwezve nzira yokushandisa nayo simba rake. VaHebheru 4:12 inoti: “Shoko raMwari ibenyu uye rine simba.” Wati wamboona simba rinoshamisa reshoko raMwari, kana kuti shoko rakafuridzirwa nomudzimu, iro zvino rakachengetwa muBhaibheri here? Rinogona kutisimbisa, kuvaka kutenda kwedu, nokutibatsira kuita kuchinja kukuru muupenyu hwedu. Muapostora Pauro akanyevera hama dzake nezvevanhu vanorarama upenyu hwounzenza hwakakomba. Ipapo akawedzera kuti: “Asi ndozvakanga zvakaita vamwe venyu.” (1 VaKorinde 6:9-11) Hungu, “shoko raMwari” rakanga raratidza simba raro mavari nokuvabatsira kuchinja.
12 Simba raJehovha iguru kwazvo uye nzira yaanorishandisa nayo inobudirira zvikuru zvokuti hapana chinogona kumumisa. Jesu akati: “Zvinhu zvose zvinobvira kuna Mwari.” (Mateu 19:26) Jehovha anoshandisa simba rake nokuda kwezvinangwa zvei?
Simba Rinodzorwa Nechinangwa
13, 14. (a) Nei tingati Jehovha haasi tsime resimba risiri munhu? (b) Jehovha anoshandisa simba rake sei?
13 Mudzimu waJehovha ndechimwe chinhu chikuru kupfuura chero simba ripi neripi; uye Jehovha haasi simba zvaro risiri munhu, tsimewo zvaro resimba. Mwari munhu chaiye anogona kudzora simba rake zvizere. Zvisinei, chii chinomuita kuti arishandise?
14 Sezvatichaona, Mwari anoshandisa simba kusika, kuparadza, kudzivirira, kudzorera—muchidimbu, kuita chero chinokodzera zvinangwa zvake zvakakwana. (Isaya 46:10) Pane dzimwe nguva, Jehovha anoshandisa simba rake kuratidza zvimwe zvinhu zvinokosha paunhu hwake nemitemo. Kupfuura zvose, anoshandisa simba rake kuti azadzise kuda kwake—kureverera uchangamire hwake uye kutsvenesa zita rake dzvene achishandisa Umambo hwaMesiya. Hapana chinhu chinogona kumbokonesa chinangwa ichocho.
15. Jehovha anoshandisa simba rake kuitei nokuda kwevashumiri vake, uye izvi zvakaratidzwa sei mune zvakaitika kuna Eriya?
15 Jehovha anoshandisawo simba rake kutibatsira isu somunhu mumwe nomumwe. Ona zvinotaura 2 Makoronike 16:9: “Meso aJehovha anotarira-tarira kumativi ose enyika yose, kuti aratidze simba rake kuna iye une mwoyo wakarurama kwazvo kwaari.” Zvakaitika kuna Eriya, zvataurwa pakutanga ndiwo muenzaniso wezvatiri kutaura. Nei Jehovha akamuratidza simba rake nenzira inoshamisa? Mambokadzi Jezebheri akanga akaipa akanga atsidza kuuraya Eriya. Muprofita uyu akanga achitiza kuti azviponese. Akanzwa kusurukirwa, kutya, uye kuora mwoyo—sokunge kuti akanga atamburira pasina. Kuti anyaradze murume ainetseka uyu, Jehovha akayeuchidza Eriya zvakajeka nezvesimba Rake. Mhepo, kudengenyeka kwenyika, uye moto zvakaratidza kuti Wemasimba Ose pane zvinhu zvose akanga ana Eriya. Chii chaaifanira kutya kuna Jezebheri, Mwari wemasimba ose ari kurutivi rwake?—1 Madzimambo 19:1-12. *
16. Nei tichigona kunyaradzwa nokufunga nezvesimba guru raJehovha?
16 Kunyange zvazvo iye zvino isiri nguva yake yokuita zvishamiso, Jehovha haana kuchinja kubva muzuva raEriya. (1 VaKorinde 13:8) Nhasi achiri kungoda kushandisa simba rake nokuda kwevanomuda. Chokwadi, anogara munzvimbo yomudzimu yakakwirira, asi haasi kure zvikuru nesu. Simba rake iguru kwazvo, naizvozvo daro harina charinokonesa. Asi, “Jehovha uri pedyo navose vanodana kwaari.” (Pisarema 145:18) Pane imwe nguva apo muprofita Dhanieri akambodana kuna Jehovha kuti amubatsire, ngirozi yakauya kwaari asati atombopedza kunyengetera! (Dhanieri 9:20-23) Hapana chinogona kudzivisa Jehovha kubatsira nokusimbisa vaanoda.—Pisarema 118:6.
Simba raMwari Rinomuita Asingasvikiki Here?
17. Simba raJehovha rinoita kuti titye mupfungwai, asi haritsigiri kutya kworudzii?
17 Simba raMwari rinofanira kutiita kuti timutye here? Tinofanira kupindura zvose kuti hungu nokuti kwete. Hungu, pakuti simba iri rinotipa chikonzero chikuru chokutya Mwari, kutya kwakadzama nokuremekedza kwatataura muchidimbu muchitsauko chapfuura. Bhaibheri rinotiudza kuti kutya kwakadaro ndiko “kutanga kwezivo.” (Pisarema 111:10) Zvisinei, tinopindurawo tichiti kwete pakuti simba raMwari haritiiti kuti tinzwe kumutya sokunge achatikuvadza kana kuti kuzeza kusvika kwaari.
18. (a) Nei vazhinji vasingavimbi nevanhu vane simba? (b) Tinoziva sei kuti Jehovha haagoni kukanganiswa nesimba rake?
18 “Simba rinowanzokanganisa munhu; kuva nesimba rose kunokanganisa zvachose.” Akanyora kudaro mumwe muchinda wokuEngland anonzi Lord Acton muna 1887. Mashoko ake akadzokororwa kakawanda, pamwe nemhaka yokuti vanhu vazhinji vanochiona chiri chokwadi chisingarambiki. Vanhu vasina kukwana vanowanzoshandisa simba zvisizvo, sezvinoramba zvichingoratidzwa nenhau dzakaitika. (Muparidzi 4:1; 8:9) Nokuda kwechikonzero ichi, vazhinji havavimbi nevane simba uye vanovatiza. Zvino, Jehovha ane simba rose. Rakamukanganisa neimwe nzira here? Kana! Sezvataona, iye mutsvene, haatombokanganisiki. Jehovha akasiyana nevarume nevakadzi vasina kukwana vane simba munyika ino ine uori. Haasati amboshandisa simba rake zvisizvo, uye haazombodaro.
19, 20. (a) Jehovha anogara achishandisa simba rake mukuwirirana nohumwe unhu hwake hupi, uye nei izvi zvichikurudzira? (b) Ungaenzanisira sei kuzvidzora kwaJehovha, uye nei kuchikufadza?
19 Yeuka, Jehovha haana simba chete. Tichafanira kudzidza nezvekururamisira kwake, uchenjeri hwake, uye rudo rwake. Asi hatifaniri kufunga kuti Jehovha anoratidza zvaari nenzira yakaoma isingachinji sokunge anoratidza chimwe nechimwe chezvaari chimwe panguva. Kusiyana naizvozvo, tichaona muzvitsauko zvinotevera kuti Jehovha nguva dzose anoshandisa simba rake mukuwirirana nokururamisira kwake, uchenjeri hwake, uye rudo rwake. Fungawo nezvohumwe unhu huna Mwari, uhwo husingawanzova nevatongi venyika—kuzvidzora.
20 Fungidzira uchisangana nemurume akasimba zvokuti unonzwa kumutya. Zvisinei, nokufamba kwenguva unoona kuti anoratidza kuva munyoro. Anogara akagadzirira uye achida kushandisa simba rake kubatsira nokudzivirira vanhu, kunyanya vasingagoni kuzvidzivirira uye vari pachena. Haamboshandisi simba rake zvisizvo. Unomuona achicherwa pasina chikonzero, asi chimiro chake chakatsiga asi chakadzikama, chinoremekedzeka, kunyange kuva nomutsa. Zvinotokunetsawo kuti dai uri iwe waizokwanisa here kuratidza unyoro nokuzvidzora kwakadaro, kunyanya kudai waiva wakasimba zvakadaro! Sezvaunosvika pakuziva murume akadaro, haunzwi zvichitanga kukuswededza pedyo naye here? Tine zvikonzero zvakawanda kupfuura ipapo zvokuswedera pedyo naJehovha wemasimba ose. Ona mutsetse wose wakazara wakatorwa musoro wechitsauko chino: “Jehovha haakurumidzi kutsamwa, une simba guru.” (Nahumi 1:3) Jehovha haakurumidzi kushandisa simba rake kurwisa vanhu, kunyange vanhu vakaipa. Munyoro uye ane mutsa. Akaratidza kuti “haakurumidzi kutsamwa” pakutarisana nokudenhwa kuzhinji.—Pisarema 78:37-41.
21. Nei Jehovha asingamanikidzi vanhu kuita kuda kwake, uye izvi zvinotidzidzisei nezvake?
21 Funga nezvokuzvidzora kwaJehovha nerimwe divi. Dai waiva nesimba guru kwazvo, unofunga kuti pane dzimwe nguva waizonzwa kuda kushandisa vanhu sezvaunoda here? Jehovha nesimba rake rose haamanikidzi vanhu kuti vamushumire. Kunyange zvazvo kushumira Mwari iri iyo nzira bedzi inoenda kuupenyu husingaperi, Jehovha haatimanikidzi kuita basa rakadaro. Asi nomutsa anoremekedza munhu mumwe nomumwe nokumupa rusununguko rwokusarudza. Anonyevera nezvemigumisiro yezvisarudzo zvakaipa uye anotaura nezvemibayiro yezvisarudzo zvakanaka. Asi chisarudzo anochisiyira kwatiri. (Dheuteronomio 30:19, 20) Jehovha haatombofariri basa rinoitwa nokumanikidzwa kana kuti nokutya kukuvadzwa nesimba rake rinoshamisa. Anotsvaka avo vachamushumira nokuzvidira, norudo.—2 VaKorinde 9:7.
22, 23. (a) Chii chinoratidza kuti Jehovha anofarira kupa vamwe simba? (b) Chii chatichadzidza muchitsauko chinotevera?
22 Ngationei chikonzero chokupedzisira nei tichifanira kurarama tichitya Mwari Wemasimba Ose. Vanhu vane simba vanowanzotya kugovana simba nevamwe. Zvisinei, Jehovha anofarira kupa vanamati vake vakavimbika simba. Anopa vamwe chiremera chakatokura, zvakadai soMwanakomana wake. (Mateu 28:18) Jehovha anopawo vashumiri vake simba neimwe nzira. Bhaibheri rinotsanangura kuti: “Ukuru ndohwenyu, Jehovha, nesimba, nokubwinya, nokukunda, noumambo; nokuti zvose zviri kudenga nezviri pasi ndezvenyu; . . . paruoko rwenyu pane simba noushe; ruoko rwenyu ndirwo runokurisa nokupa vose simba.”—1 Makoronike 29:11, 12.
23 Hungu Jehovha achafara kukupa simba. Anotopa “simba rinopfuura romuzvarirwo” kune avo vanoda kumushumira. (2 VaKorinde 4:7) Haunzwi uchikweverwa kuna Mwari ane simba uyu here, uyo anoshandisa simba rake nenzira dzomutsa kudaro uye dzinodzorwa nenheyo dzakarurama? Muchitsauko chinotevera, tichanyanya kutaura pamusoro pokuti Jehovha anoshandisa sei simba rake pakusika.
^ ndima 6 Shoko rechiGiriki rinoshandurwa kuti “Wemasimba Ose” sezvariri rinoreva “Mutongi Wezvose; Ane Simba Rose.”
^ ndima 15 Bhaibheri rinotaura kuti “Jehovha akanga asiri mumhepo . . . , mukudengenyeka kwenyika . . . , mumoto.” Kusiyana nevanamati vavanamwari vengano, vashumiri vaJehovha havamutsvaki mumasimba ezvinhu zvakasikwa. Mukurusa zvokuti akwane chero muchinhu chipi zvacho chaakasika.—1 Madzimambo 8:27.
2 Makoronike 16:7-13 Muenzaniso waMambo Asa unoratidza sei kukomba kwokukundikana kuvimba nesimba raJehovha?
Pisarema 89:6-18 Simba raJehovha rinoitei pavanamati vake?
Isaya 40:10-31 Simba raJehovha rinorondedzerwa sei pano, rakakura zvakadini, uye ringatibatsira sei isu pachedu?
Zvakazarurwa 11:16-18 Jehovha anopikira kuitei nesimba rake munguva yemberi, uye nei izvi zvichikurudzira kuvaKristu vechokwadi?